Saddex Arrimood Oo Zidane Uga Tegay Real Madrid, Sirta Aan La Ogeyn Ee Qolka Lebbiska, Sababtii Uu Tababaraha U noqday Iyo Madaxweynihii Hore Ee Los Blancos Ramon Calderon Oo Taageeray Go’aankii Zizou | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Saddex Arrimood Oo Zidane Uga Tegay Real Madrid, Sirta Aan La Ogeyn Ee Qolka Lebbiska, Sababtii Uu Tababaraha U noqday Iyo Madaxweynihii Hore Ee Los Blancos Ramon Calderon Oo Taageeray Go’aankii Zizou
(02-06-2018) Madaxweynihii hore ee kooxda kubadda cagta Real Madrid, Ramon Calderon ayaa bannaanka soo dhigay sababihii kellifay go’aankii lama filaanka ahaa ee Zinedine Zidane iskaga casilay Real Madrid.
Zidane oo laba sannadood iyo badh uu joogay Real Madrid kula guuleystay sagaal koob oo saddex ka mid ah ay ahaayeen Champions League uu waliba taariikhda ku galay, ayaa si lama filaan ah ugu dhowaaqay Khamiistii inuu ka tegay shaqadii, taas oo kaliya uu tilmaamay inay u wanaagsan tahay kooxda, isaga iyo cid walba oo kale.
Madaxweynaha Real Madrid ee wakhtigan, Florentino Perez ayaa ku tilmaamay go’aanka Zidane mid aragagixiso ah oo yimid wakhtiga aan laga fileynin, hase yeeshee, madaxweynihii isaga ka horreeyey ee Ramon Calderon oo ahaa ninkii Cristiano Ronaldo keenay Real Madrid ayaa aaminsan in Zidane uu qaatay go’aankii saxda ahaa.
Calderon waxa uu sheegay in saddex arrimood kallifeen in Zidane iskaga dhaqaaqo Real Madrid.
“Is-faham la’aan ayaa u dhexaysay isaga iyo madaxweynaha xili ciyaareedka oo dhan. Arrinka koowaad waxa uu ahaa goolhaye. Madaxweynuhu wuxuu doonayey inuu heshiis la galo goolhayaha Athletic Bilbao, laakiin Zidane ayaa u sheegay in goolhayihiisu yahay Keylor Navas. Kaddib, waxa jiray wada-hadal Robert Lewandowski ah, laakiin waxaynu ognahay inuu Zidane jecel yahay Karim Benzema. Haddana waxay dhibaato ka timid Ronaldo iyo Bale – waa arrin xun runtii, sababtoo waan jecelahay Ronaldo wax badan iyo shaqo adagna way igu qaadatay markii aan Real Madrid keenayey, laakiin may ahayn wakhtigii ku habboonaa wixii uu yidhi, sidii uu u yidhiba.” Sidaas ayuu yidhi Ramon Calderon oo u warrameyey idaacadda LoveSport Radio.
Calderon waxa uu sheegay in toddobaadyada soo socda ay Real Madrid ku jiri doonto mushkilado khilaaf iyo ciyaartooyo gadoodsan ah, waxaanu yidhi: “Dhibaatadaas ayaanu ku jjiri doonaa toddobaadyada soo socda, waxana laga yaabaa inay tahay kuwii kellifay go’aanka Zidane”
Ramon Calderon waxa kale oo uu sheegay in go’aankii Zidane aanu layaab ku noqonin, sababtoo ah toddobaadyadii u dambeeyey calaamado soo muuqanayey ayaa tusiyey waxa uu samayn doono.
“Waxa aan ogaa inuu daal dareemayey toddobaadyadii iyo bilihii u dambeeyey. Daalka badankiisa waxa keenay dhibaatooyinkii tartamada gudaha oo lagu dhalleeceeyey, taas oo u muujisay inuu lumiyey kalsoonida qolka lebbiska iyo madaxweynahaba, waana inaad xisaabta ku darto xaqiiqada ah inaanu ahayn tababare xiliyeed.” ayuu ku daray.
Calderon waxa kale oo uu sheegay in Zidane uu tababare ugu noqday Real Madrid wiilkiisa darteed, waxaanu yidhi: “Tababarenimada waxa uu u bilaabay wiilkiisa oo u ciyaarayey da’yarta darteed; Sababtaas ayuu u yimid markii Benitez la eryey, sababtaas ayuu u go’aansaday inuu bishii January shaqadan qabto, waxaanu filayey inay dhamaan doonto June, laakiin waxay ku dhamaatay saddex Champions League. Wuxuu qaatay go’aankii saxda ahaa, wayna u fiicnayd inuu tago, si caqli leh ayuu ku tegay” ayuu mar kale yidhi Ramon Calderon.
Mauricio Pochettino ayaa ah macallinka ay Real Madrid u doonayso beddelka Zidane, laakiin tababaraha Tottenham ayaa waxa uu ku adkaystay inaan lagu qabsi karin inuu isbeddel sameeyo.